Iincwadi ezimnandi kakhulu zamabali amafutshane
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zika-Etgar Keret
Rhoqo ingxelo emfutshane ifikelela kwixabiso lenoveli okanye isincoko njengemifuziselo yombhali onobuchule. Kungenxa yoko le nto imeko ka-Etgar Keret ingumbhali wamabali kunye namabali afumana kuwo inqanaba eliphezulu lokufezekiswa kwebali. Engaphezulu kwe …
Quartet, nguSoledad Puértolas
Isangqa kukugqibelela, uhambo lokungabuyi, ubuncinci ekugqibeleni buvalelwe. Isikwere sithembekile ngakumbi kubomi bokwenyani. IJometri isondele kakhulu kwimfezeko oyifunayo kodwa ekupheleni kosuku ngee-angles zayo ezingenakuphepheka kunye nemiphetho. USoledad Puértolas usizisa kule quartet, ...
Ukubamba isibhakabhaka, nguCixin Liu
Kutshanje ndiye ndafunda ukuba i-big bang isenokungabi sisiqalo sento ethile kodwa isiphelo. Esinokuzifumana ngayo sinezixhobo zokugqibela zeengoma zeNdawo iphela. Umbuzo wababhali abakhulu bentsomi bayo nayiphi na iminyaka kukubona ukuphela kwesizathu ...
Iintaka emlonyeni kunye namanye amabali, ngu Samanta Schweblin
Ibali elimnandi linokude njengengoma. USamanta Schweblin wenza uncwadi kuvavanyo lobomi obuncinci obuhamba kunye nengoma yeemeko zabo. Amabali kaSamanta avusa umculo ongapheliyo wolonwabo kunye nenkumbulo. Into eseleyo, into ekufuneka ihambile njenge-echo ...
Masidle ngolwesiHlanu mnyama, nguNana Kwame Adjei-Brenyah
Phakathi kwangoku kunye nomhla wamva nje, usuku ngalunye olutsha luya kuba lithuba elitsha lokonwabela ukusetyenziswa kakuhle kokungafunekiyo kunye nesikhumbuzo. Yonke ingumcimbi wokuphawula ileta nokuba lixesha lethu njengesithembiso. Inqaku kukuba uNana Kwame Adjei-Brenyah (mhlawumbi ngenye imini uya kuthatha isigqibo sokuzibiza ngophawu, ...
Ukutshintsha ubomi, nguXavier Sardà
Incwadi elungileyo yamabali amafutshane njengaleyo uXavier Sardà ayishwankathele ngayo apha ayikaze yenzakalise. Into elungileyo ngencwadi yamabali amafutshane kukuba umsonto awusoze ucace gca. Kuba sinokubhala isakhiwo sasimahla ngokwengqiqo yethu. Kubonwa ngoluhlobo, phantse wonke umntu ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zika-Alberto Chimal
Kukho abo beza kuncwadi olufutshane kwaye bahlala. Isiphelo sombhali webali elifutshane yinto enje ukuba uDante akazange ayifumane indlela yokuphuma esihogweni. Kwaye apho uDante wahlala kwelinye icala kunye noChimal kuye, ngokungathi wayenomdla kuloo limbo ingaqhelekanga ...
Ukwaphuka kwi-Edge yeGalaxy, ngu-Etgar Keret
Ngokukhethekileyo kule sishwankathelo, njengabanye ababalisi ababalaseleyo banamhlanje abanjengoSamanta Schweblin anokufunyanwa naye kwimvumelwano ethile, uEtgar Keret olungileyo usinika ivolumu yamabali aphazamisayo kwinto eyayisakuba luphuhliso . Tshintsha isihloko,…
Isixeko somphunga, nguCarlos Ruiz Zafón
Akuncedi nto ukucinga ngento eseleyo ukuxelela uCarlos Ruiz Zafón. Bangaphi abalinganiswa abathe cwaka kwaye zingaphi izinto ezintsha ezithe nca kuloo limbo ingaqhelekanga, ngokungathi ilahlekile phakathi kweeshelfu zamangcwaba eencwadi. Ngovuyo lokuba enye ilahlekile phakathi kweepaseji ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha5 Elandelayo →